Harkisanii kaa'uudhaan galmee kan akka fuula HTML Kuusaa faayaa keessaa irraa saxaatoo teessisuu ni dandeessa.
Dhaamsa Kuusaa faayaa kan itti saxaatoo ida'uu barbaaddu agarsiisa.
Akeektuu hantuutee osoo hin cuqaasiin saxaatoo gubbaa qubachiisi.
Yoo akeektuun hantuutee gara mallattoo harkaatti jijjiiramte, saxaatoon geessituu agarsiisa. Haala kanaan, geessituu hedduu osoo hin hojjoomiin filachuuf furtuu DirqalaAlt osoo gadi qabdee jirtuu saxaatoo cuqaasi.
Yoo akeektuun hantuutee gara mallatoo harkaatti hin jijjiiramu tahe, isa filachuuf salphaatti saxaatoo cuqaasuu ni dandeessa.
Saxaatoon takkaa erga filatamee, qabduu hantuutee gad lakkisi. Seekoondoota lamaa oliif qabduu hantuutee dhiibdee qabuun fakkaattii saxaatoo ammas cuqaasi. Fakkaattiin saxaatoo gara kuufannoo keessaatti garagalfama.
Qabduu hantuutee osoo gad hin lakkisiin, saxaatoo garakeessa Kuusaa faayaatti harkisi.
Kuusaa faayaa Irraa Wantoota Saaguu
Title is: Kuusaa faayaatti Saxaatoo Ida'uu